ဖြိုး အလ်ဝိုင်: အရှင်ကောမလ (ခ) ဆန်နီနေမင်း နှင့် ဒုတိယအကြိမ် မေး/ဖြေ (၂)
အရှင်ကောမလ (ခ) ဆန်နီနေမင်း နှင့် ဒုတိယအကြိမ် မေး/ဖြေ (၂)
အရှင်ကောမလ(ခ)ဆန်နီနေမင်း ရဲ့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးမှု စောဒနာ သောဓနာများ ဆိုတဲ့ပိုတ်စ့်အတွက် အရှင်ကောမလ (ခ) ဆန်နီနေမင်း နှင့် ဒုတိယအကြိမ် မေး/ဖြေ (၁) အနေနဲ့ ပြန်လည်စောကြောပေးလိုက်ပါတယ်…
ဆန်နီနေမင်း နှင့် ပထမအကြိမ် မေး/ဖြေ ကို ဤနေရာလေး မှာ ကလစ်နှိပ်ကာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်….
ယခုတဖန် ဆွေးနွေးရန် ကျန်ရှိနေသည့် အကြောင်းအရာများကို အရှင်ကောမလ (ခ) ဆန်နီနေမင်း နှင့် ဒုတိယအကြိမ် မေး/ဖြေ (၂) အနေနဲ့စောကြောပေးလိုက်ပါတယ်-
ဟင်းမကောင်းရင် ဒကာ ဒကာမတွေကို ကြိမ်းမောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ လုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူးဆိုတာ ခွဲခြားနားလည်စေချင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က အဲဒီလိုကြိမ်းမောင်းရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မဟောခဲ့ဘူးသလို စားကောင်းတဲ့(အပ်စပ်တဲ့)အသားနဲ့ မစားကောင်းတဲ့ (မအပ်စပ်တဲ့)အသားဆိုတာ ခွဲခြားပြီး သတ်မှတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဆင်သား၊ ခွေးသား၊ မြွေသားစတဲ့ အသားကြီးဆယ်မျိုးကိုတော့ ရဟန်းတွေအနေနဲ့မစားကောင်းသလို အရိုး အရေတွေကအစ အသုံးမပြုဖို့ သိက္ခာပုဒ်ပညတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အသားကြီးဆယ်မျိုးမှလွတ်ကင်းတဲ့ တစ်ခြားအသားတွေ ကိုတော့ အစွန်း(၃)ပါးလွတ်တယ်ဆိုရင် စားရန်အပ်စပ်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်အတွက်ရည်မှန်းပြီး သတ်ဖြတ်တာကို ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အသား
(၂) ကိုယ့်အတွက်သတ်ဖြတ်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ကြားရတဲ့အသား
(၃) ကိုယ့်အတွက်သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က ယုံမှားသံသယဖြစ်တဲ့အသား
အဲဒီလို အသားမျိုးတွေကို မစားကောင်းပါဘူး။ အဲဒီအစွန်းသုံးပါးလွတ်ကင်းတယ်ဆိုရင်တော့ စားဖို့ရန်အပ်စပ်တယ်ဆိုတာ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်က မိန့်တော်မူပြီးသားပါ။ မလွတ်ဘဲနဲ့စားတယ်ဆိုရင် စားတဲ့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်ပြီး ဘာသာတရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်မဟုတ် ဘူးဆိုတာ ဒကာတော် သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ-ဒကာတို့ရဲ့ဘာသာတရားမှာ လူကိုမသတ်ဖို့ ဘုရားသခင်က တားမြစ် ထားတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒါကို ဒကာတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တစ်ဦးဦးက လူသတ်မှု ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်သလို ဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျူးလွန်တဲ့သူရဲ့ အပြစ်ပါပဲ။ အခုလည်း အဲဒီသဘောတရားကို ခွဲခြားသိမြင်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
မှန်ပါတယ်- တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ ကျူးလွန်မှုက သာသနာ တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ ဦးဇင်းဖြေစဉ်က အသားကျတော့ မစား၊ စိတ်ဓါတ်ကျတော့ ညစ်ထေးကြတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးကြောင့်သာ ပြန်လည် ထည့်ပြောမိခြင်းပါ။ မိမိကိုရည်ရွယ်ပြီး ပြင်ဆင်ထား တဲ့ အသားကို အရှင်ဂေါတမကိုယ်တိုင်စားသုံး ခဲ့ကြောင်း ပိဋကတ်မှာ တွေ့မိပါတယ်။- အင်္ဂုတ္တိုရ် ၂- မဟာဝဂ်၊ ၂ သီဟသုတ်။ အသားဆယ်မျိုးကို အကပ္ပိယ အသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း မဟာဝဂ္ဂမှာ တွေ့ပါတယ်။ အခု ဆွေးနွေးမှုမှာ ရှင်ဂေါတမကို မဝေဖန်ပါ။ မဝေဖန်လိုပါ။ သူပြောခဲ့ပါတယ်လို့ ကိုးကားပြီး နောက်လူတွေက ဋီကာချဲ့ ထားလို့ ခံစားမိတဲ့ အရာများကိုသာ ပြောဆိုဝေဖန်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆ အဲ့လိုများဖြစ် နေရင် တကယ်တမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို သုံးစားနေတာက ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း ဦးဇင်း သိစေလိုပါတယ်။- အကယ်၍ ပါဏာတိပါတာ ဝေယာမဏိ သိက္ခာပဒံ သမ္မာဒိယာမိ ဆိုတာကို သူ့ အသက်အား သတ်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်တာဟာ တစ်ကယ့် အဓိပ္ပါယ် အစစ်အမှန်ဖြစ် ရင် ဟောပြော သူကိုယ်တိုင်က မျက်နှာသစ်လို့တောင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပါဏ ဆိုတာ (အာနာပါဏ- က ဆင့်ပွားတဲ့) အသက်ဆို တာလား၊ သို့မဟုတ် ဘ၀ ဆိုတာလား ကွဲပြားစေလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောကြော လိုက်ခြင်းပါ။ ဦးဇင်း ဆန္ဒရှိရင် စိတ်လက်ပေါ့ ပါးပြီး- လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးလိုရင် ဆွေးနွေး နိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇီဝသည် အသက်၊ ပါဏသည် ဘ၀လို့ပဲ ခံစားမိ ပါတယ်။ (ပါရာဇိကံ မှာ လည်း လူကိုသတ်- သို့မဟုတ် သေစေ မှာ ပါရာဇိကံ ထိုက်ကြောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ကို သေစေခြင်းဟာ ပါ စိတ်ကံသာ ထိုက်ကြောင်း ခွဲထားတာကို တွေ့ရလို့ပါ။)
ဒကာတော်ရဲ့ ဒီမေးခွန်းကတော့ အပေါ်မှာလည်းပါခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်မှာဖြေဆိုထားတဲ့ အဖြေတွေနဲ့လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းခြင်းသည်လည်း အကြောင်းတရားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာခလုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းသည် စာလုံးတစ်ခုပေါ်လာခြင်းရဲ့ နီးသောအကြောင်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ ကွန်ပျူတာတီထွင်ခြင်းစတဲ့ အကြောင်းတရားတွေက ဝေးသောအကြောင်းတရားတွေပါ။
ဝေးသော အကြောင်းသည်လည်း အကျိုးဆက် ဖြစ်လာမယ့် အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို ရန်ကုန်က လာတဲ့သူကို မန္တလေးရောက်တော့- ဘယ်က လာသလဲ မေးတာမှာ ပဲခူး ကျော်လာတယ်လို့ ဖြေဆိုခြင်းဟာလည်း မမှားတဲ့ အဖြေပါ။ ဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ အဖြေ မဟုတ် ဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။
ရှင်နာဂသိန် ဖြေသလို မြှားလာရာကို မကြည့်နဲ့ ဆိုလည်း စကားလုံးက လှပပါတယ်။ အဲ့လို ခံယူထား သူများ အနေနဲ့ ခံယူမှုဟာလည်း လျှော်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြှားပစ်သူ မရှိဘူးလို့ ထပ်ဆင့်ငြင်းဆို ခြင်းဟာ မသင့်တော်ပါ။
အင်း ကျားတစ်ကောင်ဟာ ပထမဘ၀မှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ ဒုတိယဘ၀မှာ မကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုရောက်ပြီး မကောင်းတာတွေ ကို ထပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း သူ့ရဲ့ အရင်ဘ၀တွေက အကျိုးပေးစရာကံတွေ ရှိပါသေးတယ်။ တတိယဘ၀ကနေ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ အထိ အကျိုးပေးတဲ့ကံဟာ ဒီဘ၀ဟာ မကောင်းတာလုပ်ပေးမဲ့ အဲဒီကံက နောက်မှအကျိုးပေးပြီး အရင်အရင်ဘ၀က ကောင်းတဲ့ အကျိုးပေးရှိနေနိုင်တာကြောင့် နောက်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာပေါက် ပြောလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ-အဇာတသတ်မင်းဟာ ဒီဘ၀မှာ အဖသတ်တဲ့မကောင်းမှုကြောင့် သူဟာ ငရဲကိုကျခဲ့ရပါတယ်။ ငရဲကျတဲ့အခါမှာလည်း သူ့မှာ ကောင်းကံလုပ်စရာ မရှိပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် သူဟာ နောက်ဘ၀ကျရင်လည်း မကောင်းတဲ့ဘုံကို ရောက်မယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ တတိယ ဘ၀ကနေ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ အကျိုးပေးမဲ့ ကောင်းမှုကံများရှိနေသေးတာကြောင့် အဲဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်ရင် သူဟာ ကောင်းတဲ့ဘုံမှာရောက်ပြီး ကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုပြန်လည်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ မကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်ပြီးရင် မကောင်းတဲ့ဘုံ ကိုထပ်ရောက်ဖို့က များတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက အပါယ်လေးပါးကျသွားရင် အပေါ်ကိုပြန်တတ်ဖို့ရာ မလွယ်ကူတာကြောင့် အပေါ်ကိုရောက်နေတုန်းမှာ အောက်ကိုပြန်မရောက်အောင် ပြုလုပ်နေထိုင်ကြပါလို့ မိန့်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းရာတွေ လုပ်ဆောင်ဘို့ ပမာပေးပြောတာလို့ နားလည်ပေးပါမယ်။ ဆက်တိုက် စောဒကတက်နေလို့လည်း တိကျသေချာတဲ့ အဖြေကို ရလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ လူတွေအနေနဲ့ ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်စေဘို့ ပြောဆိုသွန်သင်တဲ့ စကား အဖြစ်ပြောတာလို့ မြင်ပေးပါမယ်။
ဒကာတော်ကိုဘဲ အရင်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခု ပြန်မေးပါရစေ။ ဒကာတော် နံနက်တိုင်း မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာကအညစ်ကြေး ကို စင်ကြယ်လိုတဲ့စိတ်ကြောင့် မျက်နှာသစ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် ပိုးမွှားစတဲ့သတ္တ၀ါတွေ သေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မျက်နှာသစ်နေတာ လား? မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော်အခါက စက္ခုပါလမထေရ်ဟာ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ပိုးမွှားစတဲ့သတ္တ၀ါတွေကို မတော် တဆတက်နင်းမိပြီး ပိုးမွှားတွေသေကုန်လို့ တစ်ခြားရဟန်းတွေက စက္ခုပါလမထေရ်ကို ပါဏာတိပါတကံဖြင့် စွပ်စွဲကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထားတော့ ဘုရားရှင်က စက္ခုပါလမထေရ်မှာ ပိုးမွှားတွေကို သေစေလိုတဲ့စိတ် မရှိတာကြောင့် ပါဏာတိပါတကံမထိုက်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာလည်း သတ္တ၀ါတွေရဲ့အသက်ကို သတ်လိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတာတော့ အထူးပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒကာတော်ပြောသလိုဆိုရင် သတ္တ၀ါတွေရဲ့အသက်ကို မသတ်ဖို့တားမြစ်ထားတာသည်ပင် အပြစ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်တာနဲ့မသတ်တာ ဘယ်ဟာကိုပိုပြီး အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာ ဒကာတော်လည်း စဉ်းစားတတ်မှာပါ။ မမြင်ရတဲ့သက်ရှိလေးတွေကို ကရုဏာမထားနဲ့လို့ တစ်ခါမှ ဘုရားရှင်ကမဟောခဲ့ပါ။ ဒကာတော်ပြောသလို မျက်နှာသစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်ကသတ်လိုစိတ်မရှိပါဘဲ မတော်တဆ ပိုးမွှားစသော သတ္တ၀ါတွေသေနိုင်တာကို သိတော်မူလို့လည်း သတ်လိုစိတ်မရှိရင် ပါဏာတိပါတကံမမြောက်ကြောင်း၊ ဘယ်လိုအင်္ဂါတွေနဲ့ ပြည့်စုံမှသာ ကံမြောက်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူခဲ့တာပါ။ သတ်လိုစိတ်နဲ့ဆိုရင် သေးငယ်သောပိုးမွှား ခြပုန်းကအစ မသတ်ဖို့ အတိအလင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒီလို မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောကြားခဲ့တာကလည်း သူက ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့သဘာဝနဲ့သူ အပြစ်မရှိတာကိုမြင် လို့ ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ကရုဏာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ငါ ဒါကို လုပ်လိုက်ရင် သူတို့ သေတော့မှာပဲ ဆိုတာကို သိလျှက် အဲ့ဒီ အလုပ်ကို လုပ်နေခြင်းဟာ အသက်များကို သေစေမှု၊ အသက်များကို သတ်နေမှု ထဲမှာ မပါဝင်ဘူးလား- ဒါဆို ရှင်ဂေါတမ လုပ်ခဲ့တာ (ဆရာတော်များ ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောတာပါ) အကုန်ကောင်းတယ် ဝေဖန် သုံးသပ် နေစရာ မလိုဘူးလို့ ဖြစ်မနေဘူးလား ဦးဇင်း-။ ဒါဆို ကာလမသုတ်ကို ဘာဖြစ် လို့ ဟောခဲ့ သေးတာလဲ။ မမြင်သူက အသက်သေမှာကို မသိလို့ မသတ်မိတာ အပြစ်မရှိနိုင်ပေမယ့် မြင်နေသူက အသက်များ သေမှာကို သိလျှက် ကျူးလွန်နေခြင်းဟာ သွယ်ဝှိက်သောနည်းနဲ့တောင် အပြစ် မသင့် နိုင်ဘူးလား-။ ဒီလိုဆို သေနတ်တစ်လက်ကို ကိုင်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုလို့ မရည်ရွယ်ဘဲ လူကြားထဲ ပစ်ထည့် လိုက်သူ တစ်ဦးကြောင့် သူမရည်ရွယ်တဲ့ လူ သေသွားရတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သူ ကို အရေးယူနေတာ မှားယွင်းနေပါသလား။- ဦးဇင်းဖြေကြည့်ပါ။
နွားလောက် အကောင်ကြီးတဲ့ သတ္တ၀ါမှာလည်း အသက်က တစ်ခုတည်းပါ။ မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ ပိုးလေး တွေလည်း အသက်က တစ်ခုတည်းပါ။ အကောင်ကြီးလို့ အသက် နှစ်ခု သုံးခု မပါသလို။ အကောင် သေးလို့လည်း အသက် တစ်ခုထက်လျှော့ပြီး ထက်ဝက်၊ တစ်စိတ် ပါဝင်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။
မိမိရဲ့ မျက်နှာ၊ မျက်လုံးကျမ္မာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆီးတဲ့အခါ ပိုးမွားများ အသက်ကို စတေးလိုက်ရသလို၊ မိမိတို့ လူသားများ ၀မ်း- ခန္ဓာ ကျမ္မာရေးအတွက် နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိတ် စတေးလိုက်ရတာ ဘယ်လိုများ ကွာမယ် ထင်ပါသလဲ- ဦးဇင်း
သစ္စာလေးပါးကို ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် ဒကာတော်အနေနဲ့ သစ္စာလေးပါးအကြောင်းကို ဘယ်လောက်အထိ သိနားလည် သလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သစ္စာလေးပါးအကြောင်းကို အသေးစိတ် သိနားလည် တယ်ဆိုရင် ဒကာတော်မေးတဲ့ မေးခွန်းက ဖြေစရာတောင်မလိုဘဲ သူ့အလိုလိုရှင်းသွားမှာပါ။ ဒကာတော်ရဲ့မေးခွန်းကို ဖတ်ကြည့်သောအားဖြင့် သစ္စာလေးပါးအကြောင်းကို တီးမိ ခေါက်မိရုံလောက်တောင် မသိဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
သစ္စာလေးပါးအကြောင်းကို တီးမိခေါက်သိတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့မှာသုံးပါးဖြစ်လိုက် နောက်နေ့မှာငါးပါးဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မမေးပါဘူး။ သစ္စာလေးပါး ဆိုတာ ဖောက်ပြန်မှုမရှိတဲ့ တိကျတဲ့နိယာမတစ်ခုပါ။ မည်သည့်အရာကမှ ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လောကမှာ ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က အဲဒီသစ္စာတရားကို ဖော်ထုတ်ပြသသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကို မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်တီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်သလို တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က တီထွင်ခဲ တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေတာတွေကို မြတ်ဗုဒ္ဓကသိမြင်ခဲ့လို့ သိမြင်ခဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ပြောပြပေး ခဲ့တာပါ။ ဒကာလည်း သစ္စာလေးပါးအကြောင်းကိုလည်း နားလည်အောင် လေ့လာပါလို့ စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒီလောက်တိကျတဲ့ ဖေါက်ပြန်မှုမရှိတဲ့ အရာတစ်ခုက၊ နိယာမတစ်ခုက ဘာအသိဉာဏ်မှ မရှိတဲ့ သဘာဝအလျှောက်ကြောင့် ဆိုတာ တစ်ကယ် ဖြစ်နိုင်ပါလား ဦးဇင်း ဟိုးအထက်မှာ Atuo တံခါး ဥပမာ ဆွေးနွေးမှုများကို ပြန်ကြည့်ပါ။
သဘာဝအလျှောက် သူ့အလိုလိုတည်နေတဲ့ အရာချည်းပဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေလည်း ဘာမှ လုပ်နေစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်သလိုနေ၊ ကြုံသလိုစား- သူ့အလိုလို သဘာဝ အလျှောက် ဘာကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်မသွားနိုင်တာလဲ။ ဦးဇင်း ဆင်ခြင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အင်း ဦးဇင်း တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ မဟောခဲ့ဘူးလို့ မပြောခဲ့ပါဘူး ဒကာ။
ဒီသဘောတူညီချက် အပေါ်မှာ ဦးဇင်းကဲ့သို့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးသာ ဆွေးနွေးနေရပါတယ်- ရှင်ဂေါတမကို စော်ကားသလို ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေမိပါတယ်။
ဒကာပြောတဲ့အရာတွေက ကျေးဇူးရှင်တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိခိုးရိုသေတဲ့အခါမှာ မိမိမလုပ်နိုင်တာကိုလုပ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ထက်သာလို့ အဲဒီလူဟာ မိမိထက် အဆင့်အတန်းမြင့်လို့ ရှိခိုးရိုသေရတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ဒကာ။ အပေါ်က မြတ်ဗုဒ္ဓ ရှိခိုးတယ်ဆိုတာတွေထဲမှာလည်း အဲဒါတွေ ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဇင်းက လိုရင်းအဓိကကျတာကိုပဲ ဖြေပေးခဲ့တာမို့ပါ။ မိဘတွေက ယနေ့မှ ကိုရင်ဝတ်တဲ့ သားကို ဘာဖြစ်လို့ ရှိခိုးရတာလဲဆိုတော့ မိဘတွေက စောင့်ထိန်းတဲ့သီလတရားထက် ကိုရင်ဖြစ်သူက သာသွားလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ကိုရင်ဝတ်ရုံထားတဲ့သင်္ကန်းဟာ မိဘတွေဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျိ ပုဆိုးထက် မြင့်မြတ်လို့ ပါ။ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာက သာသနာဘောင်မှာနေတဲ့ ကိုရင်၊ ရဟန်းတွေရဲ့ အ၀တ်တန်ဆာဟာ ကိလေသာကုန်အောင် အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ်များရဲ့ အ၀တ်တန်ဆာဖြစ်နေလို့ ခုဝတ်နေတဲ့ကိုရင်ရဟန်းဟာ ရဟန္တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း ထိုနည်းတူမြင့်မြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာမို့ ရည်းမှန်းရိုသေရှိခိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ-ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မလာသော်လည်း ဘုရင်ရဲ့အမိန့်စာပါတာနဲ့ အဲဒီအမိန့်စာရှေ့မှာ ဒူးထောက်ရိုသေပေးရသလို ကိုရင်လေးဟာ ဒီနေ့ဘာမှမဖြစ်သေးပဲ သူဝတ်ရုံထားတဲ့ အရဟတ္တဓဇ-ဘုရားရဟန္တာတို့ရဲ့ အ၀တ်အစားဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရိုသေကန်တော့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် ဦးဇင်း ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းပြောတဲ့ ဒသန မျိုးက တစ်ကယ့် လက်တွေ့မှာ ဓမ္မစရိယများရဲ့ ပါးစပ်ဖျားလောက်မှာသာ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိတ်ပြီး အားကိုးမရှိ အားကိုးရှာ (နတ်က အစ အိမ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီး) ကိုးကွယ်နေတာပဲ- ပြီးတော့ သူတစ်ပါးကိုတော့ ဆုတောင်းခြင်းဟာ မှားနေသလိုလို လျှောက်ပြောနေတော့ မခက်ဘူးလား။
ဦးဇင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်မှာပါ။- စကားလုံးအရ မဟုတ်ပေမယ့် သဘောတရားအရ အတော်လေး အတွေးအခေါ်တူညီတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဦးဇင်း အားမှပါ။